Ukusekela ukuhamba porn mahhala | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Ukuyeka Ukuzijabulisa Ukuhamba Ngesithombe Sokuzijabulisa
Ukuphila ezweni lesimanje, uma ufuna ukuyeka i-porn ukuze uphile i-porn yamahhala cishe ngeke ukwazi ukuyeka ukusebenzisa i-laptop, ithebhulethi noma i-smartphone obukade uyayibuka kukho. Usazodinga ukuzisebenzisela imfundo, umsebenzi nempilo yakho yenhlalo.
Kunezinyathelo eziningi zokusiza.
Qala njalo ngokususa zonke izithombe ezivela kumadivayisi wakho. Kungaba isikhala, kodwa lesi senzo sithumela ubuchopho bakho ukuthi isifiso sakho sokushintsha sinsimbi. Khumbula ukususa isipele kanye nodoti. Futhi ususe wonke amabhukumaka kumasayithi we-porn kanye nomlando wakho wesiphequluli.
Uma ngabe usebenzisa i-VPN noma i-Virtual Private Network, kufanele futhi ihambe.
Hambisa ifenisha yakho nxazonke noma wenze olunye ushintsho lapho ubuka khona izithombe zobulili ezingcolile. Izinkomba zemvelo ezihlotshaniswa nokusetshenziswa zingaba izimbangela ezinamandla ngoba zona ngokwazo zikhipha i-dopamine. Cabanga ukusebenzisa amadivayisi akho aku-inthanethi kuphela endaweni eyimfihlo, ongayihlanganisi nokusetshenziswa kocansi. Noma uguqule imvelo yakho 'yesikhala se-porn'. Susa 'isihlalo sakho sokushaya indlwabu' noma umane ususe ifenisha yakho.
Cabanga ukuvimba i-porn. Ama-porn blockers wokuphila mahhala kwe-porn awabufakazi bobuqili. Zifana namajubane. Zikunikeza isikhathi sokubona ukuthi usuzokwenza lokho ongafuni ngempela ukukwenza. Ekuqaleni kwenqubo yokululama, ngaphambi kokuba izindlela zokuzibamba ebuchosheni bakho zibuyiselwe ekusebenzeni okugcwele, ama-blocker angasiza kakhulu. Ekugcineni, ngeke ubadinge.
EBrithani, umhlinzeki wakho we-intanethi (ISP) kufanele akuvumele ukuthi ukhethe ukusebenzisa izihlungi zabantu abadala kumasevisi wakho we-broadband. Lokhu manje kuyatholakala ku-Virgin Media, Sky, BT ne-TalkTalk. Hlola nge-ISP yakho. Isevisi yokuvimbela ngokuvamile ayikhokhwa. Izinsizakalo zokuvimbela azitholakali ekugcineni zonke izithombe ezingcolile, kodwa kufanele ziwanele abantu abaningi beyeka izithombe zobulili ezingcolile.
Uma ubuka i-porn kuselula yakho ungacela inethiwekhi yakho ukuthi isuse ukufinyelela 'kokuqukethwe kwabantu abadala'. Ungabi namahloni.
Isofthiwe yamahhala yokuvimbela i-porn iyatholakala kulezi zingosi:
Amafoni omakhalekhukhwini avela kumanethiwekhi afana ne-EE ne-T-Mobile ahlelwe ngokukhiya okuqukethwe ngaphakathi okudinga ukuthi umuntu abe ngaphezu kwe-18 futhi asebenzise ikhadi lesikweletu ukuze afinyelele okuqukethwe komuntu omdala. Lokhu kubonakala kusebenza kahle ngokugcina okuqukethwe kocansi. Xhumana nenkampani yakho yefoni ukuze uthole usizo olwengeziwe ukuvimba okuqukethwe uma kudingeka.
I-Reward Foundation ayihlinzeki ngemithi.
<< Ukuthola Usizo I-TRF 3-Step Step Recovery Model >>